Wednesday, November 18, 2009 Sọnde, Septemba 8, 2013 Matt Nettleton
Ahịa bụ a otutu ihe siri ike karịa ka ọ na-adị na-… site oge folks na-akpọ gị ahịa otu, ha na-nnọọ nke ọma-asian. Ekwenyere m na ọ kpatara nnukwu mgbanwe na sistemụ ebe ahịa siri ike karịa ka ọ dị na mbụ ma ọ kacha mma ịhapụ ndị ọkachamara. Y’oburu n’ibughi onye ahia ruru eru n’oge ugbua, igha abu onye na ewere ihe n’ego.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịghọta ihe mere m ji kpọọ post a Ewepụghị-Isi Oche na Kamikazes, dị njikere pịa site na post maka ọdịyo. Matt bụ onye mara mma nke nwere nnukwu ihe atụ.
Ndi webusaiti gi na - ekwuputa ihe ndi ndu gi nke oma kariri ka ndi n’enye gi? Olileanya, ebe nrụọrụ weebụ gị na-egosiputa ozi zuru oke iji kpalite mmasị na ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ gị, na-enye nkọwa doro anya nke ihe ezigbo onye ahịa bụ, na anaghị enye ọtụtụ ozi nke nnukwu ndu na-ahapụ na-enweghị itinye aka. Ọ bụ nlezianya anya!